महरा प्रकरणः कुन दिन के भयो ? यसरि बिते २८ दिन ! – Idea Khabar
आइडिया खबर२०७६ कार्तिक १६, शनिबार १७:३४
पुर्व सभामुख कृष्ण बहादुर महरा प्रकणको लामो समय लगाएर अनुसन्धानको क्रम चलिरहेको छ । आइतबारको छुनछेक बहस पछि कस्तो फैसला आउला त ? यो सबैको चासोको विषय बनेको छ । हेरैँ यस प्रकरणमा आज सम्म के के भए त ?
१८ असोजमा रोशनीको किटानी जोहरीले महरा १९ असोजमा पक्राउ परे । तर, ३ कात्तिकमा उनले महराविरुद्ध जाहेरी प्रहरीको करकापले गरेको अदालतसमक्ष बयान दिइन् ।
१५ कात्तिकमा महरामाथि काठमाडौं जिल्ला अदालतको बन्द इजलाशमा बयान । महराले आफूमाथिको अभियोग अस्वीकार गर्दै षड्यन्त्र भएको भने ।
Pingback: पूर्वसभामुख महराको सोमबार पनि बयान लिईने , – Idea Khabar